Global Voices teny Malagasy » Iràka: “Soa ihany fa tsy Baomba tanaty Fiara!” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Janoary 2019 17:08 GMT 1	 · Mpanoratra Salam Adil Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràka, Ady & Fifandirana, Fanabeazana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Saripika, Teknolojia
Rehefa avy niala sasatra kely aho, tsy misy tsara mihoatra nóho ny fanomezako ireo mpamaky izay tena tiany ho vakiana -teny avy any an-dalamben'i Bagdad sy Mosul. Ary tsy misy fotoana tsara nóho ity satria niverina nanoratra bilaogy avy ao Bagdad i Chikitita, manome ny fomba fijeriny ny tanàna iray izay nilaozany tanatin'ny volana maro. Ary i Neurotic Wife, mandehandeha manerana ny ‘faritra mena ‘. I Baghdad Dentist koa miverina ao Mosul rehefa avy niala sasatra tao Bagdad ary mitantara amintsika ireo fasamihafana.
Toa nahita ny volana alohan'Ibiby aho tanatin'ny lahatsoratro teo aloha. Nisy mpandeha iray, izay zara raha nahavita naka aina sy nijery ny patalohany raha nisy diam-bovoka, nilaza fa vintana no tsy nahafaty azy taminà daroka baomba… namakivaky ny tanànan'ny fahazazako mihitsy ny IED . Ny nahafanina ahy tamin'ity tanora mpandeha ity dia ilay izy nitsiky raha nihazakazaka nanenjika fiara fitateram-bahoaka, sy ilay teniny nampihomehy “soa ihany fa tsy baomba tanaty fiara ilay izy!” Akory izany vintantsika!
Miala ny Faritra Maitso  mba hanao fitetezana tsy fahita firy an’ireo araben'i Bagdad  i Neurotic Wife ary mivoaka misakafo anatinà trano fisakafoana ao an-toerana. Milaza izy:
Miverina ao Mosul i Baghdad Dentistem  rehefa avy niala sasatra an-tanindrazana tao Bagdad. Manome sarim-piainana ho an'ilay tanora mpitovo miasa ao amin'io tanàna io izy:
Na ireo anjerimanontolo sy ny mpianatra aza dia tsy afaka mandositra io herisetra io. Manoratra i Aunt Najma :
Na dia tafaraikitra ao an-trano aza ianao, nahita fomba hitsidihana izao tontolo izao avy eo ambony sezany ao Bagdad  i Marshmallow26:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/17/133722/
 faritra mena: http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Zone_%28Iraq%29
 nalain'i Neurotic Wife: http://www.bubbleshare.com/album/332586/overview#11704782
 Faritra Maitso: http://en.wikipedia.org/wiki/Green_zone
 ireo araben'i Bagdad: http://neurotic-iraqi-wife.blogspot.com/2008/03/amazing-baghdadi-day.html
 Manoratra i Aunt Najma: http://astarfrommosul.blogspot.com/2008/03/aunt-najma-x-3.html
 avy eo ambony sezany ao Bagdad: http://iraqi-roses.blogspot.com/2008/03/mantra.html
 mantra : https://en.wikipedia.org/wiki/Mantra